Ogaden News Agency (ONA) – Sarkaalka Sare ee Ciidanka Qalabka Sida Waa Inuu Tusaale u Yahay Wadinyadda Umadaasi
Sarkaalka Sare ee Ciidanka Qalabka Sida Waa Inuu Tusaale u Yahay Wadinyadda Umadaasi
Posted by ONA Admin	/ April 30, 2014
Sarkaalk Somaliyeed ee Ciidanka Qalabka Sida waxaa lagu soo barbaarin jiray wadaniyadda iyo inuu ku seexdoo kusoo tuuso inay jiraan dal Somaliyeed oo wali gumaysi ku jira. Markay marayaan Dhoolatusyada 1da Luulyo ama 21kii Oktoobar, haweenka Somaliyeed qaar badan ayaa suuxi jiray oo dhulka laga qaadi jiray jacaylka ay u hayaan wiilashooda qalabka sida darteed. Taasi waxay ahayd shalay.
Maanta, haduu Sarkaalkii sare ee shalay ka tanaasulo caqiidadiisii dagaal wuxuu la mid noqonayaa un calooshii u shaqayste ka kiraysanaya aqoontiisa dagaal cadawgiisii shalay. Sidaa daraadeed, ayaa marka la arko Sarkaal sare oo u galaya cadawgii uu shalay ku barbaarinayay askartiisa waxaa shaki galaya taariikhdiisii hore waxaana lagu tiriyaa inuu iibsaday sharaftii ciidanka umadiisa.
Waxaa dhaqan u ah saraakiisha ciidanka marka ay ka fadhiistaan masuuliyday u hayeen ciidanka qalabka sida, sikastaba ha uga fadhiistaane, inay tusaale u noqdaan ciidankuu ka tirsanaa iyo macnaha wadiniyadda iyo islaweynida umaddaasi ay leedahay si dhalinyarada bidhaansanaysa ee laga doonayo inay difaacaan dalka ugu noqdaan tusaale ay ku daydaan oy ugu biiraan ciidanka umadda ee difaacaya dalka. Hadiise sarkaalkii laga doonayay inuu u noqdo bulshada shaqsi ku dayasha mudan oo difaacaya sharafta umadiisa uu u tago cadawgii lagu soo barbaariyay inuu ka difaacayo umadiisa oo qudhigiisu markuu dhalinyarada qorayo ciidanka uu ku barbaarin jiray nacaybkooda, wuxuu noqonayaa sarkaalkaasi calooshii u shaqayste, sharaftuu umadda ku dhex lahaana lagu tuurayo qashinka.
Ereyga (Mercenary مرتزق) ayaa afka Somaliga waxaa lagu dhahaa Calooshii-u-Shaqayste. Erey bixintaa meel cidla ah kama imaanin. Marka la sharxayo ereyga –Mercenary- waxaa lagu sharxaa qof u adeegaya oo ku shaqaynaya lacag darteed, ama waa Askari loo kireystay inuu ciidan dal kale u shaqeeyo. (A mercenary is defined as someone who serves or works merely for monetary gain, or a professional soldier hired for service in a foreign army.)
Shaqsi ahaa Sarkaal sare oo ka tirsanaa Ciidanka Qalabka Sida ee Jamhuuriyada Somaliya (SNA), oo waliba laga yaabo inuu ka mid yahay Somalida Ogadenya ee gumaysiga Itobiya ku jirta, shaqsigaa oo u dhaartay difaaca Qaranka Somaliyeed iyo Xoreynta dalka maqan, markuu iskii ugu tago Itobiya oo dhex fadhiisto calooshood u shaqaystayaal loo kiraystay laynta shacabka masaakiinta ah ee Somaliyeed, maxaa lagu tilmaami karaa Sarkaalkaa, inagoo waliba ogsoon ujeedada uu ugu tagay inay tahay inay Itobiya ka raali noqoto, oo taariikhdiisiina ilowdo, suu u dhexgalo siyaasadaha maamulada Somaliya ay Itobiya ka abuurto? Waa su’aal ka fiirsasho u baahan.
Waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay u fahmaan urur ahaan in aan ka xunahay arintaa, waana dhab oo waan ka xunahay, gaar ahaan markaan aragno shaqsi umadda u hanweyneyd oo meel aan munaasib ku ahayn ka dhex muuqda oo Cabdi iley u hoos fadhiista inuu Itobiya kala hadlo.